Jizọs Agwọọ Otu Onye Ekpenta | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Nigerian Pidgin Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
MATIU 8:1-4 MAK 1:40-45 LUK 5:12-16
JIZỌS AGWỌỌ OTU ONYE EKPENTA
Ka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya anọ na-ekwusa ozi ọma “n’ụlọ nzukọ n’ime Galili dum,” akụkọ banyere ihe ndị ọ na-eme gbasara ebe niile. (Mak 1:39) Akụkọ banyere ọrụ ya ruru n’otu obodo ebe e nwere otu nwoke na-arịa ekpenta. Luk onye ọgwọ ọrịa kọwara nwoke ahụ dị ka onye “ekpenta zuru ahụ́.” (Luk 5:12) Ọrịa a kawa njọ, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ kwarụọ akụkụ ahụ́ ụfọdụ nke onye ọ na-arịa.
N’ihi ya, ọnọdụ onye ekpenta a nọ na ya jọgburu onwe ya. O bipụkwara iche. Ihe ọzọkwa bụ na nwoke a ga na-eti “Adịghị m ọcha, adịghị m ọcha!” ma ndị mmadụ chọwa ịbịa ya nso iji mee ka ha ghara ịbịaru ya nso ma bute ọrịa a. (Levitikọs 13:45, 46) Ma, gịnị ka nwoke a ga-eme ugbu a? Ọ bịakwutere Jizọs ma daa n’ala n’ihu ya na-arịọ ya, sị: “Onyenwe anyị, ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ, ị pụrụ ime ka m dị ọcha.”—Matiu 8:2.
Nwoke ahụ gosiri na ya nwere ezigbo okwukwe n’ebe Jizọs nọ. Ọrịa a emeekwala ka o yie onye e kwesịrị imere ebere. Olee ihe Jizọs ga-eme? Ọ bụrụ na ị nọ ebe ahụ, gịnị ka ị gaara eme? Jizọs nwere ọmịiko n’ahụ́ nwoke ahụ. Ọ matịrị aka ya metụ nwoke ahụ aka ma sị ya: “Achọrọ m. Dị ọcha.” (Matiu 8:3) O juru ụfọdụ ndị anya na ekpenta nwoke ahụ lara ozugbo.
Ị̀ ga-achọ inwe eze nwere ọmịiko, onye nwekwara ike ịrụ ọrụ ndị dị ebube ka Jizọs? Otú Jizọs si mesoo onye ekpenta ahụ ihe na-emesi anyị obi ike na mgbe ọ ga-achịwa ụwa niile, amụma Baịbụl a ga-emezu: “Ọ ga-emere onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya na ogbenye ebere, ọ ga-azọpụtakwa mkpụrụ obi ndị ogbenye.” (Abụ Ọma 72:13) N’eziokwu, n’oge ahụ, Jizọs ga-eme ihe na-agụsi ya agụụ ike ime, ya bụ, inyere ndị niile na-ahụsi anya aka.
Ì chetara na tupu Jizọs agwọọ onye ekpenta a, ọ bụ akụkọ gbasara ozi ya bụ ihe na-ekwo ebe niile? Ugbu a, ndị mmadụ ga-anụkwa gbasara ọrụ ebube a ọ rụrụ. Ma, Jizọs achọghị ka ndị mmadụ nwee okwukwe na ya naanị n’ihi ihe ha nụrụ n’ọnụ ndị ọzọ. Ọ ma gbasara amụma ahụ e buru na “ọ gaghịkwa eme ka a nụ olu ya n’okporo ámá.” Ihe amụma a pụtara bụ na Jizọs agaghị achọ ihe ga-eme ka ndị mmadụ towe ya. (Aịzaya 42:1, 2) N’ihi ya, Jizọs nyere onye ekpenta ahụ ọ gwọrọ iwu, sị: “Hụ na ọ dịghị onye ị kọọrọ, kama gaa gosi onye nchụàjà onwe gị, nyekwa onyinye Mozis kwuru ka a na-enye.”—Matiu 8:4.
Mana, ị manụ na ọ ga-esi ike onye e meere ụdị ihe a emechie ọnụ. Ụdị obi ụtọ nwoke ahụ nwere na a gwọọla ya mere ka ọ pụọ kọsaa ya ebe niile. Nke a mere ka ndị mmadụ chọkwuo ịma ihe merenụ. O ruziri na nke na o siiri Jizọs ike ịba n’ime obodo ka ndị mmadụ ghara ịma na ọ batara. Ọ bụ ya mere o ji gaa nọtụ obere oge n’ebe ndị mmadụ na-ebighị. N’agbanyeghị nke a, ọtụtụ ndị sí ebe dị iche iche gara ka ọ kụziere ha ihe, gwọọkwa ndị na-arịa ọrịa.
Olee ihe ekpenta nwere ike ime mmadụ, gịnịkwa ka a chọrọ ka onye ekpenta na-eme?
Olee otú onye ekpenta si rịọ Jizọs ka ọ gwọọ ya, gịnịkwa ka ihe Jizọs zara ya na-eme ka anyị mata?
Olee ihe nwoke ahụ Jizọs gwọrọ mere, oleekwa ihe ihe ahụ o mere mere ka ndị mmadụ mee?